Lambarka Uu Camp Nou Ku Xidhan Doono Camp Nou, Haddii Ay Matthijs de Ligt Isa Soo Raaci Doonaan Iyo De Jong Oo Arimo Dhawr Ah Ka Hadlay. | Laacib.net
Lambarka Uu Camp Nou Ku Xidhan Doono Camp Nou, Haddii Ay Matthijs de Ligt Isa Soo Raaci Doonaan Iyo De Jong Oo Arimo Dhawr Ah Ka Hadlay.
Saxiixa cusub ee kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa haddaba qorshaynaya waayihiisa cusub ee uu Camp Nou ka bilaaban doono.
Frenkie de Jong ayaa si cajiib ah macasalaamayn uga helay jamaahiirta kooxdiisa Ajax ee kulankii ugu danbeeyay ee garoonka kooxdiisa.
De Jong ayaa sidoo kale wax laga waydiiyay saaxiibkiisa kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt oo Barcelona lala xidhidhinayo in ay Camp Nou isku raaci doonaan.
Ajax ayaa haddaba ugu dhawaan ku guulaysatay koobka horyaalka Holland waxayna sidoo kale soo hanteen koobka kale ee maxaliga ah halka Frenkie de Jong uu semi-finalkii Champions League la soo gaadhay.
Laakiin Frenkie de Jong ayaa shaaciyay magaca lagu xardhi doono garanka kooxdiisa cusub ee Barcelona waana magac ayna jeclaysan doonin shirkada Nike oo soo saartay maaliyada Barcelona.
Waxa kale oo Frenkie de Jong la waydiiyay lacagta uu ka samayn doono heshiiskiisa Barcelona halka aanu wali kala ogayn lambarka uu Barcelona u xidhan doono.
Frenkie de Jong ayaa Ajax u xidha No.21 waxaana hadda Barcelona u qaata da’yarka Carles Alena kaas oo ay suurtogal tahay in lagu qasbi doono in uu lamarka u baneeyo xidiga lacagta qaaliga ah laga soo bixiyay De Jong.
Waxa uu Frenkie de Jong xaqiijiyay in magaca lagu qori doono maaliyada kooxdiisa cusub ee Barcelona in uu noqon doono “De Jong’ halka shirkada Nike ay doonaysay in lagu qoro Frenkie.
Frenkie De Jong oo ka hadlaya magaca uu maaliyada kooxdiisa cusub ee Barcelona ku qoran doono ayaa ayaa yidhi: “Lambarkayga Barcelona wali lama xaqiijin, laakiin magucu waxa uu si sahlan noqon doonaa De Jong”.
Frenkie De Jong ayaa la waydiiyay lacagta uu Camp Nou ka samayn doono wuxuuna yidhi: “Maxaan doonayaa in aan ku shaqaysto? (qosol) Taasi ma aha waxaan idinkala sheekaysan karo. Waxaan ku faraxsanahay waxaan hadda qabanayo iyo waxa aan ka samayn doono Barca”.
“Lacagtu lagama maarmaan uma aha in ay farxada iibiso” ayuu Frenkie De Jong hadalkiisa sii raaciyay isaga oo aan u arag in lacagtu ay wax walba tahay.
Miyuu Frenkie De Jong maalin uun ku laaban doonaa Ajax? Jawaabtan ayuu bixiyay: “Anigu ma samayn karo badalanta ah in aan maalin ku soo laaban doono Ajax. Qofna ma oga waxa uu mustaqbalku xambaarsan yahay. Waxa aan sheegi karo ayaa ah in aan Ajax jecelahay”.
“Waxaan filayaa in ay tahay koox fantastik ah, xaqiiqdii meesha kama saarayo in aan soo laaban doono” ayuu De Jong hadalkiisa ku sii xoojiyay.
De Jong ayaa wax laga waydiiyay saaxiibkiisa kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt oo isna lala xidhidhinayo Barcelona wuxuuna soo dhaweeyay haddii ay Camp Nou ku midoobaan.
De Jong oo ka hadlaya Matthijs de Ligt ayaa yidhi: “Daacad ahaantii, anigu ma ogi waxa uu doonayo in uu De Ligt sameeyo. Waa go’aankiisa, laakiin waxba kama qabo hadii uu Barcelona ku soo biiro”.
“Way fiicanaan lahayd haddii aanu sii wada jirno isla markaana xaqiiqdii Barca ayay u fiican tahay in ay la soo saxiixato ciyaartoy la adeegsan karo sanadaha soo socda”.